နည်းနည်းသက်သာလည်း . . . မဆိုးပါဘူး . . . | FOX Sports Myanmar
နည်းနည်းသက်သာလည်း . . . မဆိုးပါဘူး . . .
ဟိုက်ရှားဘား. . . .
လို့ပဲအော်ပြီး အံ့သြရမလား။ Facebook မှာရေပန်းစားနေသလို အိုး. . .ခိုင်. . . မော့ ဆိုပြီးပဲဘုရားတရမလား လမ်းပျောက်ရလောက်အောင် ဆန်းကြယ်လွန်းလှပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းကမှ လစာစံချိန်တင်ပေးပြီးငှားခဲ့တဲ့ အရှေ့ဥရောပ သားကြီးကို ဖြုတ်ပြီး “မင်းညံ့တယ်ကွာ” လို့လက်ညှိုးနဲ့ လျှော်ကြေးတွေထိုးပေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်တဲ့ ဂျာမနီသားကြီးကို နိုင်ငံလက်ရွေးစင် အသင်းဝကွက် အပ်လိုက်ပြန်ပြီတဲ့။ တကယ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာ့ဘောလုံးကို မျက်ခြေမပြတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အနေအထားလေးရှိနေတယ်လို့ အထင်ကြီးထားတာ။ ကြမ္မာဂြိုဟ်ဆိုးဝင်ပြီး လက်ကိုင်ဖုန်းလေး အနိစ္စသဘောနဲ့ကိစ္စချော သွားလို့ မျက်ချေပြတ်သွားတဲ့ (၃)ရက်လောက်အတွင်း အလှည့်အပြောင်းအကြမ်းစားကြီးတွေ ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့ လမ်းပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလဲ မထူးဆန်းလှတော့ပါဘူး။
အဲ. . . နောက်တစ်ခုရှိသေးတဲ့ နည်းစနစ်ကော်မီတီ ဆိုတဲ့ ဂုရုကြီးများရဲ့ အဖွဲ့ . . . သူတို့ပဲ လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက် တုန်းက လက်ရွေးစင်နည်းပြအဖြစ်မသင့်တော် ဆိုပြီးဖြုတ်လိုက်တဲ့ နည်းပြကို အခုကျတော့ လက်ရွေးစင်နည်းပြအဖြစ် သင့် တော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပြန်ခန့်အပ်လိုက်ပါသတဲ့။ နောက်တစ်ရက်လောက်နေတော့ နည်းပြဟောင်းကို ဖြူတ် နည်းပြသစ်အဖြစ်နည်းပြဟောင်းကို ပြန်ခန့်တဲ့ ဂုရုကြီးများအဖွဲ့ကို ပြန်ပြုပြင်ဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုပြီး အတွင်းရေးမှူးဟောင်းကြီး တစ်ယောက်တည်းက တစ်ကိုယ်တော် အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဆက်ရှိနေမယ်တဲ့။ တစ်ဦးကော်မီတီပေါ့ . . .။ ဘာတွေက ဘယ်လိုတွေ လာပြီး ဘယ်ဆီကိုသွားနေလဲဆိုတာ ကြည့်ရင်းနဲ့ နားလည်းရမယ့်အစားမျက်စေ့တွေပဲလည်နေတာ ငါတစ်ယောက်တည်းလား လို့ လိုက်မေးဖို့လိုနေပြိထင်တယ်။
ကဲ . . .ထားပါတော့ နားမလည်တဲ့ကိစ္စတွေ လိုက်စဉ်းစားနေတာဘာမှ အကျိုးမရှိဘူး။ နားလည်လောက်တဲ့ ဘောင်ထဲ ကအကြောင်းလေးဘဲ နည်းနည်းစဉ်းစားတာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ရာဂျူလိုဗစ်ကို ဘာလို့ဖြုတ်လဲ။ ရလဒ်မကောင်း လို့ (၄)ပွဲကစားတာ (၁)ပွဲပဲနိုင်လို့တဲ့။ ဟုတ်ပြီ နည်းပြပြောင်းရင်ရောနိုင်မလား။ မေးမနေတော့ပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း “အကောင်း ဆုံး ကြိုးစားသွားပါ့မယ်” လောက်နဲ့ပဲ ပြီးသွားမှာပါ။ ဒါဆို မကောင်းဘူးဆိုပြီး ဖြုတ်ခဲ့တဲ့နည်းပြ ပြန်ခန့်တာကရော . . .။ ရှင်းပါတယ်။ ဒါရလဒ်တွေဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာ အန်တိုနီဟေးကိုထုတ်လိုက်လို့ ဆိုပြီးပြောတဲ့သူတွေများလာတော့ “မင်းတို့ကြိုက် တဲ့နည်းပြခန့်ပေးတယ်နော် . . .ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ငါတို့မှာတာဝန်မရှိ ပလို့ဂျိ . . .” ဒါပဲပေါ့။ ငါးကြင်းဆီနဲ့ ငါးကြင်းကြော် ပြီး နားပူသက်သာအောင် ခဏလောက်ဘေးထွက်ထိုင်မယ် အိုကေ . . .။
သေချာတာကတော့ အားလုံးသိထားသလိုပါပဲ။ နည်းပြတစ်ယောက်အပြောင်းအလဲလုပ်ရုံနဲ့ မြန်မာ့ဘောလုံးအဆင့် အတန်းကြီးက ၀ုန်းကနည်းထိုးတက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ ပရိသတ်တွေလဲသိတယ်။ ကျွန်တော်လဲသိတဲ့။ အဲဒီနည်းပြတွေ ဖြုတ်လိုက်ခန့်လိုက်လုပ်နေတဲ့သူတွေလဲသိတယ်လေ။ မြန်မာ့ဘောလုံးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာ ပြင်စရာတွေမှ အများကြီး။ အများကြီးဆိုတာထက် မပြင်ရမယ့်နေရာတောင်မရှိဘူးဆိုမှ မှန်လိမ့်မယ်ဗျ။ ခုချိန်မျိုးမှာ ကမ္ဘာကျော် ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ပဲလာလာ။ အဘ၀င်းပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဒါမှမဟုတ် ခုထိပ်ဆုံးက မောင်မောင်ပက်ပ်တို့ ဂျာဂင်ကလော့ပ်တို့ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ပြိုင်ပွဲ(၃)ခုလောက် ဆက်ကိုင်နိုင်တယ်ဆိုရင် သူတို့နည်းပြစွမ်းရည်တော့မသိဘူး ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစွမ်းရည်က နိုဗယ်ဆု ပေးလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပြီ။ ပြီးရင်လျှော်ကြေးတွေယူအိမ်ပြန် ဆိုတဲ့ဖော်မြူလာကွက်ဝင်မှာပဲမဟုတ်လား။
အခုကျွန်တော်တို့ မြန်မာ့ဘောလုံးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားက ချောင်းဆိုးသွေးပါရောဂါကို နှစ်ရှည်ခံစားနေရတဲ့လူနာလိုပဲ တစ်နေ့တစ်ခြားအခြေအနေဆိုးလာတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ ဒီနေရာမှာ နည်းပြတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လဲနေတာက ရောဂါအမြစ်ပြတ်ပျောက်ဖို့မဟုတ်ဘဲ လောလောဆယ်သက်သာစေဖို့ Vick (ချောင်းဆိုးပျောက်ငုံဆေး) ကျွေးနေသလိုပဲ။တစ်ခါတစ်လေ အနာနဲ့ ငုံဆေးနဲ့ တည့်တည့်မိတဲ့အခါ ခဏသက်သက်သာသာနေရမှာပေါ့။ ပြီးရင်ပြန်ဖြစ်မှာပဲ။ အဲဒီအခါမှာ နောက်ထပ် Strepsil တို့ Hacks တို့ပြောင်းပြီးစားပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဇာပျံလေးတို့ ဦးချိန်တီတို့နဲ့လဲ ခဏတော့သက်သာမှာပေါ့။
ထားပါတော့ဗျာ။ တကယ်ဆို ချောင်းဆိုးသွေးပါ ဝေဒနာသည်ကြီး မြန်မာ့ဘောလုံးက တဖြည်းဖြည်းနေ၀င်ချိန်နီးလာပြီ။ ဒါကိုလဲ ငုံဆေးတွေ၊ ဆေးမြီးတိုတွေပဲတိုက်နေတာ အပြစ်ပြောနေလဲဘာမှထူးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဝေဒနာသည် အနားမှာ ကပ်ပြီး ဓာတ်စာတွေကူစားနေကြတာ အများကြီးကိုးဗျ . . .။ ဒီတော့ ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကိုယ်လုပ်ပေါ့။ ၀ယ်လာတဲ့ဆေးမြီးတိုကိုပဲ ရသလောက် အကျိုးရှိအောင်သုံးဖို့ပြောရမှာပါ။ ပထမအကြိမ်တုန်းက “အန်တိုနီဟေး” အခု တစ်ခေါက်တော့ “အံတိုနေပြီဟေး” ဖြစ်နေလောက်ပြီ။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်း နည်းစနစ်ပိုင်းနဲ့ တည်ဆောက်မှုအပိုင်းမှာ သိပ်မခေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာ မြင်ခဲ့ဖူးပြီပဲ။ ပထမတစ်ခေါက် သူရှိတုန်းက တော်တော်လေး ကောင်းခဲ့ပေမယ့် သူပြန်သွားတော့ ဒုံရင်းပြန်ဖြစ်သွား တယ်ဆိုတာ သူ့ဆီက ဘာမှမကျန်ခဲ့တဲ့သဘောပဲလေ။ ဒီတော့ ကစားသမားဖြစ်ဖြစ်။ နည်းပြဖြစ်ဖြစ်။ အုပ်ချုပ်/စီမံ အဖွဲ့ ကဖြစ်ဖြစ် ဒီတစ်ခေါက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆီက နည်းနည်းပါးပါးတိုးတက်မှုလေးများရအောင်ယူနိုင်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်ဗျ။
ဒီစာကိုရေးနေရင်းသတိရလာတဲ့ ဆရာမောင်ကောင်းထိုက်(နှီးပဒေါ)ရဲ့ ဟာသလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်မျှဝေချင်ပါသေးတယ်။ တစ်ခါက ဆေးအရောင်းဆိုင်တစ်ခုက ၀န်ထမ်းက အပြင်သွားစရာကိစ္စပေါ်လာတော့ သူ့တပည့်ကို ခဏလွှဲခဲ့ပါသတဲ့။ တပည့်လုပ်တဲ့လူက ခပ်တုံးတုံး၊ ခပ်အအ ဖြစ်တဲ့အပြင် ရောက်တာလည်းမကြာသေး အဲဒီတော့ ဆရာလုပ်တဲ့လူပြတဲ့ဆေးတွေ ထဲမှာ “၀မ်းနှုတ်ဆေး” တစ်မျိုးပဲမှတ်မိပါသတဲ့။ နောက်နှစ်နာရီလောက်အကြာမှာ ဆရာလုပ်တဲ့လူပြန်လာတော့ ၀ယ်သူဘယ် နှစ်ယောက်လာလဲမေးတာပေါ့။ တပည့်က “၂ ယောက်ပဲလာတယ်ဆရာ၊ ပထမတစ်ယောက်က ခေါင်းကိုက်လို့တဲ့ အဲဒါကျွန်တော်လဲ ၀မ်းနှုတ်ဆေးပေးလုိုက်တယ်” “ဒါဆိုနောက်တစ်ယောက်ကရော သူကတော့ ချောင်းအရမ်းဆိုးနေလို့တဲ့ ကျွန်တော်လဲဝမ်းနှုတ်ဆေးပဲပေးလိုက်တာ ချက်ချင်းကိုသောက်ချလိုက်တာပဲ” “ဟေ . . .အဲဒါဘာဆက်ဖြစ်လဲ” “ဟိုဆိုင်ရှေ့မှာ ကုန်းကုန်းကွကွနဲ့ ရပ်နေတာအဲဒီလူပဲ အော် . . အဲဒီတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလေ ဟိုမှာ မျက်နှာကြီးကလဲနီလို့ ချွေးသီး ချွေးပေါက်တွေနဲ့လေ တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကိုကြည့်ပြီးပွစိပွစိလုပ်နေတာ အခုသူချောင်းမဆိုးရဲတော့ဘူး” တဲ့ဗျ။
ဟာသလေးပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးသွေးပါဝေဒနာသည်ကြီးကို ငုံဆေးတိုက်မယ့်အစား ၀မ်းနှုတ်ဆေး တွေများတိုက်မိရင် နာလည်းနာသေး နံလည်းနံသေး ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် လောလောဆည်အနေအထား မှာ ဆေးမြီးတိုဖြစ်ပေမယ့် နည်းနည်းလေးသက်သာအောင်တော့ အကျိုးရှိရှိသုံးကြဗျို့ . . .
ဟိုက်ရြားဘား. . . .
လိုႛပဲအော်္ဘပီး အံ့ဩရမလား။ Facebook မြာရေပန်းစားနေသလို အိုး. . .ခိုင်. . . မော့ ဆ္ဘိုပီးပဲဘုရားတရမလား လမ်းပေဵာက်ရလောက်အောင် ဆန်ုးကယ်လနြ်းလပြၝတယ်။ လန်ြခဲ့တဲ့လပိုင်းကမြ လစာစံခဵိန်တင်ပေး္ဘပီးငြားခဲ့တဲ့ အရြေႚဥရောပ သားဋ္ဌကီးကိုဖတ်္ဘြပီး “မင်းညံ့တယ်ကြာ” လိုႛလက်ညြိးနဲႛ လ္တွော်ေုကးတေထြိုးပေး္ဘပီူးပန်လတ်ြလိုက်တဲ့ ဂဵာမနီသားဋ္ဌကီးကိုိုိံင်ငံလက်ရြေးစင် အသင်းဝကကြ် အပ်လိုက်ူပန်္ဘပီတဲ့။ တကယ်ပၝ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ူမန်မာ့ဘောလုံးကို မဵက်ေူခမူပတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အနေအထားလေးရြိနေတယ်လိုႛ အထင်ဋ္ဌကီးထားတာ။ုကမ္ထ္ဘာဂိဟ်ြဆိုးဝင်္ဘပီး လက်ကိုင်ဖုန်းလေး အနိင်္စသဘောနဲႛကိင်္စခေဵာ သြားလိုႛ မဵက်ခေဵူပတ်သြားတဲ့ (၃)ရက်လောက်အတငြ်း အလညြ့်အေူပာင်းအုကမ်းစားဋ္ဌကီးတြေူဖစ်ခဲ့တာဆိုတော့ လမ်းပေဵာက်သြားတယ်ဆိုတာလဲ မထူးဆန်းလတြော့ပၝဘူး။
အဲ. . . နောက်တစ်ခုရြိသေးတဲ့ နည်းစနစ်ကော်မီတီ ဆိုတဲ့ ဂုရုဋ္ဌကီးမဵားရဲႚ အဖြဲႛ . . . သူတိုႛပဲ လန်ြခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက် တုန်းက လက်ရြေးစင်နည်ူးပအူဖစ်မသင့်တော် ဆ္ဘိုပီူးဖတ်ြလိုက်တဲ့ နည်ူးပကို အခုကဵတော့ လက်ရြေးစင်နည်ူးပအူဖစ် သင့် တော်ဆိုတဲ့ခေၝင်းစဉ်နဲႛူပန်ခန်ႛအပ်လိုက်ပၝသတဲ့။ နောက်တစ်ရက်လောက်နေတော့ နည်ူးပဟောင်းကိုဖတြ် နည်ူးပသစ်အူဖစ်နည်ူးပဟောင်းကိုပန်ခန်ႛတဲ့ ဂုရုဋ္ဌကီးမဵားအဖြဲႚကိုပန်ူပြူပင်ဖြဲႛစည်းမယ်ဆ္ဘိုပီး အတငြ်းရေးမြးဟောင်းဋ္ဌကီး တစ်ယောက်တည်းက တစ်ကိုယ်တော် အဖြဲႛဝင်အူဖစ်ဆက်ရြိနေမယ်တဲ့။ တစ်ဦးကော်မီတီပေၝ့ . . .။ ဘာတေကြ ဘယ်လိုတြေ လ္ဘာပီး ဘယ်ဆီကိုသြားနေလဲဆိုတာုကည့်ရင်းနဲ့ နားလည်းရမယ့်အစားမဵက်စေ့တေပြဲလည်နေတာ ငၝတစ်ယောက်တည်းလား လိုႛ လိုက်မေးဖိုႛလိုန္ဘေပိထင်တယ်။
ကဲ . . .ထားပၝတော့ နားမလည်တဲ့ကိင်္စတြေ လိုက်စဉ်းစားနေတာဘာမြ အကဵြိးမရြိဘူး။ နားလည်လောက်တဲ့ ဘောင်ထဲ ကအေုကာင်းလေးဘဲ နည်းနည်းစဉ်းစားတာ အဆင်ေူပပၝလိမ့်မယ်။ အဲဒီတော့ ရာဂဵလြိုဗစ်ကို ဘာလိုႛူဖတ်ြလဲ။ ရလဒ်မကောင်း လိုႛ (၄)ပြဲကစားတာ (၁)ပြဲပဲိုိံင်လိုႛတဲ့။ ဟုတ်္ဘပီ နည်ူးပေူပာင်းရင်ရေိာုိံင်မလား။ မေးမနေတော့ပၝဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း “အကောင်း ဆုံး ဋ္ဌကြိးစားသြားပၝ့မယ်” လောက်နဲႛပ္ဘဲပီးသြားမြာပၝ။ ဒၝဆို မကောင်းဘူးဆ္ဘိုပီူးဖတ်ြခဲ့တဲ့နည်ူးပူပန်ခန်ႛတာကရော . . .။ ရငြ်းပၝတယ်။ ဒၝရလဒ်တေဆြိုးနေတဲ့အခဵိန်မြာ အန်တိုနီဟေးကိုထုတ်လိုက်လိုႛ ဆ္ဘိုပီးေူပာတဲ့သူတေမြဵားလာတော့ “မင်းတိုႛဋ္ဌကိကြ် တဲ့နည်ူးပခန်ႛပေးတယ်နော် . . .ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ငၝတိုႛမြာတာဝန်မရြိ ပလိုႛဂဵိ . . .” ဒၝပဲပေၝ့။ ငၝုးကင်းဆီနဲႛ ငၝုးကင်းေုကာ်္ဘပီး နားပူသက်သာအောင် ခဏလောက်ဘေးထက်ြထိုင်မယ် အိုကေ . . .။
သေခဵာတာကတော့ အားလုံးသိထားသလိုပၝပဲ။ နည်ူးပတစ်ယောက်အေူပာင်းအလဲလုပ်ရုံနဲႛူမန်မာ့ဘောလုံးအဆင့် အတန်းဋ္ဌကီးက ဝုန်းကနည်းထိုးတက်သြားမြာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ။ ပရိသတ်တေလြဲသိတယ်။ ကဵန်ြတော်လဲသိတဲ့။ အဲဒီနည်ူးပတြေူဖတ်ြလိုက်ခန်ႛလိုက်လုပ်နေတဲ့သူတေလြဲသိတယ်လေ။ူမန်မာ့ဘောလုံးတိုးတက်ဖိုႛဆိုတာူပင်စရာတေမြ အမဵားဋ္ဌကီး။ အမဵားဋ္ဌကီးဆိုတာထက် မူပင်ရမယ့်နေရာတောင်မရြိဘူးဆိုမြ မန်ြလိမ့်မယ်ဗဵ။ ခုခဵိန်မဵြိးမြာ ကမ္တာကေဵာ် ဆာအဲလက်စ် ဖာဂူဆန်ပဲလာလာ။ အဘဝင်းပဲူဖစ်ူဖစ်။ ဒၝမမြဟုတ် ခုထိပ်ဆုံးက မောင်မောင်ပက်ပ်တိုႛ ဂဵာဂင်ကလော့ပ်တိုႛ ဘယ်သူပဲူဖစ်ူဖစ်္ဘပိင်ြပြဲ(၃)ခုလောက် ဆက်ကိုင်ိုိံင်တယ်ဆိုရင် သူတိုႛနည်ူးပစမြ်းရည်တော့မသိဘူး ပေၝင်းသင်းဆက်ဆံရေးစမြ်းရည်ကိုိံဗယ်ဆု ပေးလိုႛရတဲ့အနေအထာူးဖစ်န္ဘေပီ။္ဘပီးရင်လ္တွော်ေုကးတေယြူအိမ်ူပန် ဆိုတဲ့ဖော်ူမလြာကက်ြဝင်မြာပဲမဟုတ်လား။
အခုကဵန်ြတော်တိုႛူမန်မာ့ဘောလုံူးဖစ်နေတဲ့အနေအထားက ခေဵာင်းဆိုးသြေးပၝရောဂၝကိုိံစ်ြရည်ြခံစားနေရတဲ့လူနာလိုပဲ တစ်နေႛတစ်ူခားအေူခအနေဆိုးလာတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိုကမြာပၝ။ ဒီနေရာမြာ နည်ူးပတေတြစ်ယောက်္ဘပီးတစ်ယောက် လဲနေတာက ရောဂၝအူမစ်ူပတ်ပေဵာက်ဖိုႛမဟုတ်ဘဲ လောလောဆယ်သက်သာစေဖိုႛ Vick (ခေဵာင်းဆိုးပေဵာက်ငုံဆေး) ကေဵြးနေသလိုပဲ။တစ်ခၝတစ်လေ အနာနဲႛ ငုံဆေးနဲႛ တည့်တည့်မိတဲ့အခၝ ခဏသက်သက်သာသာနေရမြာပေၝ့။္ဘပီးရင်ူပန်ူဖစ်မြာပဲ။ အဲဒီအခၝမြာ နောက်ထပ် Strepsil တိုႛ Hacks တိုႛေူပာင်း္ဘပီးစားပေၝ့။ တစ်ခၝတစ်လေတော့လည်း ဇာပဵံလေးတိုႛ ဦးခဵိန်တီတိုႛနဲ့လဲ ခဏတော့သက်သာမြာပေၝ့။
ထားပၝတော့ဗဵာ။ တကယ်ဆို ခေဵာင်းဆိုးသြေးပၝ ဝေဒနာသည်ဋ္ဌကီူးမန်မာ့ဘောလုံးက တူဖည်ူးဖည်းနေဝင်ခဵိန်နီးလ္ဘာပီ။ ဒၝကိုလဲ ငုံဆေးတြေ၊ ဆေး္ဘမီးတိုတေပြဲတိုက်နေတာ အူပစ်ေူပာနေလဲဘာမထြူးမြာမဟုတ်ပၝဘူး။ ဘာလိုႛလဲဆိုတော့ ဝေဒနာသည် အနားမြာ ကပ်္ဘပီး ဓာတ်စာတေကြူစားနေုကတာ အမဵားဋ္ဌကီးကိုးဗဵ . . .။ ဒီတော့ ကိုယ်တတ်ိုိံင်သလောက် ကိုယ်လုပ်ပေၝ့။ ဝယ်လာတဲ့ဆေး္ဘမီးတိုကိုပဲ ရသလောက် အကဵြိးရြိအောင်သုံးဖိုႛေူပာရမြာပၝ။ ပထမအဋ္ဌကိမ်တုန်းက “အန်တိုနီဟေး” အခု တစ်ခေၝက်တော့ “အံတိုန္ဘေပီဟေး”ူဖစ်နေလောက်္ဘပီ။ ဒီပုဂ္ဂိလ်ြကလည်း နည်းစနစ်ပိုင်းနဲႛ တည်ဆောက်မအြပိုင်းမြာ သိပ်မခေတဲ့ ပုဂ္ဂိလ်ြဆိုတာူမင်ခဲ့ဖူး္ဘပီပဲ။ ပထမတစ်ခေၝက် သူရြိတုန်းက တော်တော်လေး ကောင်းခဲ့ပေမယ့် သူပန်သြားတော့ ဒုံရင်ူးပန်ူဖစ်သြား တယ်ဆိုတာ သူႛဆီက ဘာမမြကဵန်ခဲ့တဲ့သဘောပဲလေ။ ဒီတော့ ကစားသမာူးဖစ်ူဖစ်။ နည်ူးပူဖစ်ူဖစ်။ အုပ်ခဵပြ်/စီမံ အဖြဲႛ ကူဖစ်ူဖစ် ဒီတစ်ခေၝက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိလ်ြဆီက နည်းနည်းပၝးပၝးတိုးတက်မလြေးမဵားရအောင်ယိူုိံင်ဖိုႛ တိုက်တနြ်းခဵင်တယ်ဗဵ။
ဒီစာကိုရေးနေရင်းသတိရလာတဲ့ ဆရာမောင်ကောင်းထိုက်(ြီံးပဒေၝ)ရဲႚ ဟာသလေးတစ်ပုဒ်ကိုပန်မ္တွဝေခဵင်ပၝသေးတယ်။ တစ်ခၝက ဆေးအရောင်းဆိုင်တစ်ခုက ဝန်ထမ်းက အူပင်သြားစရာကိင်္စပေၞလာတော့ သူႛတပည့်ကို ခဏလြဲခဲ့ပၝသတဲ့။ တပည့်လုပ်တဲ့လူက ခပ်တုံးတုံး၊ ခပ်အအူဖစ်တဲ့အူပင် ရောက်တာလည်းမုကာသေး အဲဒီတော့ ဆရာလုပ်တဲ့လူပတဲ့ဆေးတြေ ထဲမြာ “ဝမ်ိးံတ်ြဆေး” တစ်မဵြိးပဲမတ်ြမိပၝသတဲ့။ နောက်ိံစ်ြနာရီလောက်အုကာမြာ ဆရာလုပ်တဲ့လူပန်လာတော့ ဝယ်သူဘယ်ိံစ်ြယောက်လာလဲမေးတာပေၝ့။ တပည့်က “၂ ယောက်ပဲလာတယ်ဆရာ၊ ပထမတစ်ယောက်က ခေၝင်းကိုက်လိုႛတဲ့ အဲဒၝကဵန်ြတော်လဲ ဝမ်ိးံတ်ြဆေးပေးလိုက်တယ်” “ဒၝဆိုနောက်တစ်ယောက်ကရော သူကတော့ ခေဵာင်းအရမ်းဆိုးနေလိုႛတဲ့ ကဵန်ြတော်လဲဝမ်ိးံတ်ြဆေးပဲပေးလိုက်တာ ခဵက်ခဵင်းကိုသောက်ခဵလိုက်တာပဲ” “ဟေ . . .အဲဒၝဘာဆက်ူဖစ်လဲ” “ဟိုဆိုင်ရြေႚမြာ ကုန်းကုန်းကကြနြဲႛ ရပ်နေတာအဲဒီလူပဲ အော် . . အဲဒီတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူးလေ ဟိုမြာ မဵက်ြိာံဋ္ဌကီးကလဲနီလိုႛ ခေဵြးသီး ခေဵြးပေၝက်တေနြဲႛလေ တစ်ခၝတစ်လေ ကဵန်ြတော်တိုႛဆိုင်ကိုကည့်္ဘပီးပစြိပစြိလုပ်နေတာ အခုသူခေဵာင်းမဆိုးရဲတော့ဘူး” တဲ့ဗဵ။
ဟာသလေးပၝပဲ။ ဒၝပေမယ့် ကဵန်ြတော်တိုႛခေဵာင်းဆိုးသြေးပၝဝေဒနာသည်ဋ္ဌကီးကို ငုံဆေးတိုက်မယ့်အစား ဝမ်ိးံတ်ြဆေး တေမြဵားတိုက်မိရင် နာလည်းနာသေး နံလည်းနံသေး ဆိုတာမဵြိူးဖစ်သြားလိမ့်မယ် လောလောဆည်အနေအထား မြာ ဆေး္ဘမီးတိုဖစ်ပေမယ့် နည်းနည်းလေးသက်သာအောင်တော့ အကဵြိးရြိရြိသုံုးကဗဵြိႚ . . .
Home Football Team Myanmar နည်းနည်းသက်သာလည်း . . . မဆိုးပါဘူး . . .